Description:Hazo fanasambe Koreana,Toeram-pandaharam-potoana manamarika ny lalana mihodina KS,Galss Perles ho an'ny mari-pamantarana mirindra
Home > Products > Hazo fanondronam-bolo > KS L2521 Glass Beads for Road Paint
Vorona Glass dia baolina tsy misy loko sy mangarahara, tsy misy blasony sy fahalotoana hita.
Ary azo ampiasaina amin'ny fampiasana hafa, anisan'izany ny fitsaboana amin'ny arabe, ny mari-pamantarana eny an-dàlambe, ny taranjam-pandrefesana, ny loko, ny loko, ny loko, ny marika, ny marika, ny marika loko,
Volo madinika vita amin'ny glasy no ampiasaina amin'ny loko maranitra sy maharitra, mba hampisehoana ny fahazavana miverina amin'ny mpamily amin'ny toetr'andro na ny toetr'andro mamirapiratra - manatsara ny fiarovana sy ny fahitana. Ny kiraro fitaratra dia mitana toerana lehibe eo amin'ny fiarovana ny arabe. Mandritra ny andro dia mampiseho ny fahitana ampy ny fotodrafitrasa fototry ny fototarazo, izay mifanohitra amin'ny asfalt. Amin'ny alina dia tsy ampy ny fanoherana ny tsipika fotsy ary tsy maintsy ampitomboina amin'ny fampitomboan'ny jiro mitaratra tariby.
KS L2521 (Standards Koreana) Glass Beads ho an'ny Roadmarking Reflective
Hazo fanasambe Koreana Toeram-pandaharam-potoana manamarika ny lalana mihodina KS Galss Perles ho an'ny mari-pamantarana mirindra Hazo fanasam-barotra mavo Hazo fanasan-damba tsy misy porofo Sandam-be matevina Kitapo manganaham-bato madinika Kilalao fanontam-bolo natao manokana